A dụọla ma kpọkuo ndị Igbo n'ụwa gbaa gburu gburu ka ha jisie ike na-echeta ebe ha si, n'ihe ọbụla ha na-eme, na n'ebe ọbụla ha hụtara onwe ha. Eze ọdịnala Nnewi bụ Igwe Kenneth Orizu nyere ndụmọdụ a oge ndị otu Ọhanaeze Ndị Igbo, ngalaba steeti Anambra gara kpọtụrụ ya n'obi ya dị na Nnewi.
Ya bụ Igwe kwara arịrị otu e si akpazuga ma na-agbakụtazị ndị Igbo azụ n'ihe dị iche iche a na-eme n'ala Naịjitia, ma kpọkuzie ndị ndu nke Ọhanaeze Ndị Igbo na ndị Igbo niile n'izugbe ka ha gbasie mbọ ike ịhụ na ndị Igbo nwetaghachiri ezi ọnọdụ ha na ugwu ha n'ala Naịjiria.
O mekwara ka a mara na ọ bụ site n'ijikọta aka ọnụ nke ụmụafọ Igbo dịka ótù ndị ka a pụrụ isi wee mee nke a, maka na gidigi bụ ugwu eze.
N'okwu nke ya, onyeisi oche otu Ọhanaeze Ndị Igbo na steeti Anambra, bụ maazị Damian Okeke-Ogene, onye kọwara na ebumnobi ha jiri bịa mkpọtụrụ ahụ bụ iji wee guzube ndị ọrụ, a họpụtara ọhụụ, ga-abụ ndị ndu nke otu Ọhanaeze Ndị Igbo n'okpuru ọchịchị Nnewi Nọọtụ, gosipụtara ezi olile anya o nwere na site na nkwado ndị eze ọdịnala na ndị ha na-achị, na a ga-enweghachite ebube na ugwu ndị Igbo azụ n'ala anyị, bụ nke fugoro efu n'ezie.
N'ozi ekele ya, nwaeze Jideọfọ Iwuchukwu kpọkuru ma dụọ ndị ndu nke otu ahụ ka ha gaa n'ihu ime ka ndị mmadụ mara ma na-esonyesikwa ike n'ihe dị iche iche ha na-eme.